Hiran State - News: SH:- Aqoonyahano iyo siyaasiyin horey sadaal ugu bixiyey doorashadii madaxweynah iyo gudoomihah baarlamaanka
SH:- Aqoonyahano iyo siyaasiyin horey sadaal ugu bixiyey doorashadii madaxweynah iyo gudoomihah baarlamaanka
HS:- Siyaasada guud ee dalka Soomaaliya ayaa u muuqata mid cagadhigan rabto marka la eego farxada iyo dabaal degyada ka socda wadamada caalamka gaar ahaan kuwa ay ku badan yahiin jaaliyadaha Soomaaliyeed.
Maalintii shaley oo aheyd maalin aad ugu weyn bulshada Soomaaliyeed kuwooda dareensan waxa ay tahay dowladnimadu kadib markii loo caleema saaray 4ta sano ee soo socota inuu dalka Soomaaliya hogaamiyo Dr Hasan Shiikh Mohamud oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed xili gudoonka baarlamankana loo doortay aqooyahan kale oo lagu tuhmayo waaya aragnimo iyo wadaniyad maadaama uu mudo ku soo dhax jiray siyaasada Soomaaliya Prof Mohamed Shiikh Cismaan jawaari. sida ka muuqata magacyada labadan masuul waxey ka soo jeedaan waalidiin culumo ah amaba hadaan sikale u dhigno qoysas culimo ah waana masuuliyiin durbaba laga dareemayo aqlaaq iyo deganaan.
Marka laga soo tago madaxweynaha cusub ee Somaliya iyo gudoonka baarlamaanka waxaa jira quburo Soomaaliyeed oo markasta saadaal ka bixiya xaalada carin ee Soomaaliya isbuucyadii ugu danbeysana saadaal ka bixinayey cida ku haboon madaxweynaha Soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo ay horey u sheegeen in ay macquul tahay in ay ku guuleystaan Prof jawaari iyo shaqsi ay ku sheegeen inuu ka soo jeedo Hiiraan. nasiib wanaag labadiiba waxey noqotay run oo madaxweynaha Soomaaliya waxuu ka soo jeedaa Hiiraan waana madaxweynahii labaad ee reer Hiiraan ah oo xilkaan qabta, halka gudoomiyaha baarlamaanka uu ka soo jeedo gobolada Bay iyo Bakool.
Hadaba siyaasiyiintaan iyo aqoonyahanadan ayaa aragtitooda ku cabiray shaqsiga ay isleeyahiin wada shaqeyn xoogan ayaa dhex mari karta madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka wxeyna si xoogan u saadaalinayaan inuu xilkaas ku guuleysan doono R/wasaarahii hore ee Soomaaliya Farmaajo iyagoo siweyn u qeeraya arintaas waxey yiraahdeen.
Marka la eego Soomaalida maanta nool iyo silaca kuheysta xabsiyada aduunka amaba xeryaha qaxootiga Soomaaliya waxey u baahan tahay maanta hogaamiyaal uu qilaafkoodu aad u yar yahay oo la dabaaqtama beesha caalamka iyo shaqsiyaadka amaba shirkadaha dhibta ku haya dalkeenii hooyo. Farmaajo ayey sheegeen inuu waayey dad la fahmi kara siyaasadiisa ilaa markii danbe kursigii uu ku fadhiyey ay ka tuuraan wasiirkiisii Qorsheynta iyo wasiirkii Boostada iyo Isgaarsiinta C/kariin Jamac iyo C/wali Gaas.
Ugu danbeyn saadaashooda ayey ku soo koobeen in hadii Farmaajo loo doorto xilkaan uu aad u yaraan doono qilaafka masuuliyiinta ugu sareysa dalka maadaama madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamanka shacabka hortooda ka shegen in hada kedib uu yaraan doono qilaafka masuuliyiinta dowlada. waxey siweyn uga digeen in mar kale madaxda dowlada laga hago Garoowe iyadoo uu dalku yeeshey dowlad rasmiya ah maadaama reer Puntland marka siyaasadooda dhinac kasta laga eego ay ku soo aruurtay dano qabiil, degaan iyo shaqsiyadeed ilaa ay beesha caalamka ka dhaadhiciyaan in ay Puntland tahay furaha siyaasada dalka Soomaaliya oo hadii sidey rabaan loo yeeli waayo ku dhiiran karaan arimo badan oo aysan ku dhiiran karin Soomaalida kale.
Marka laga soo tago xilka wasiirka 1aad oo ay sheegeen aqoonyahanadan inuu yahay qofka ka soo dhalaali kara Farmaajo hadane waxey aad u amaaneen madaxweynaha cusub oo ilaa hada wareysiyadiisii ugu horeeyey ay isku mid noqdeen sheegayna inuu xooga saarayo amniga.
Waa mid ceynkee ah xukuamda cusub ee la filayo?
Xukumada ayey ku sheegeen in ay ahaato mid tayo leh oo tiradeedu yar tahay.iyagoo madaxweynaha kula taliyey inuu ka faa'ideysto qaar ka mid ah musharaxiintii Soomaaliyeed oo iskugu jiray kuwo doorashadii looga guuleystay iyo kuwo xili hore tanaasulay iyagoo si gooyni ah farta ugu fiiqayo musharaxiin ay ka mid yahiin.
1- Mohamed Cabdullaahi Farmaajo.
2-Ahmed Muumin Warfaa oo ay sheegeen xitaa hadii aan wax xil ah loo dhibin in laga faa'ideysto qibradiisa. Prof Warfaa ayaa la sheegayaa inuu ka mid ahaa shaqsiyaadka la saadaalinayey hadii uu guulesto inuu soo dhisi doono xukumad ka duwan kuwii horey loo saadaalin jiray kadib markii sida lagu soo waramayo isaga iyo teamkiisu ay dejiyeen qorshe fog oo bulshada Soomaaliyeed u saamaxaya iney si nabad ah kumaraan Raaskaambooni ilaa raas caseyr iyagoo diyaariyey qorshe lagu qiyaasay inuu ku kacayo 15 Billion Dolar 5ta sano ee soo socota walow aan la shaacin meesha ay dhaqaalahaas ka imaanayaan hadane fursadaas waa looga faa'ideyn karaa dalka hadii hogaanka cusub muujiyaan niyadsami, si dalkana loo bad baadiyo waa lama huraan in aqoonyahanada qibrada leh sida Prof Warfaa in loo adeegsado dejinta dalka ayaa hadalkooda ka mid ahaa aqoonyahanadan.
3- Prof Ahmed Ismaaciil Samatar ayaa ka mid ah shaqsiyaadka ay saadaalinayaan in laga faa'ideysan doono aqoontooda.iyo rag fara badan oo aanu halkaan kusoo koobi karin. muhiim maahan in qofka laga dhigo wasiir laakinse waxey leeyahiin maanta marxalada uu dalku ku jiro qofkasta oo Soomaali ah lagama maarmo si taasi u dhacdana waa lama huraan in xooga la saaro sidii lagu heli lahaa r/wasare nadiif ah dadkuna jecel yahiin ayey hadalka kusoo qatimeen.
Aqoonyahanadan ayaa naga codsaday in aanan magacyadooda xusin inta laga soo dhameynayo dhismaha xukumada.
La soco wararkeena danbe iyo arimaha siyaasada Soomaaliya iyo hogaanka cusub.
· admin on September 17 2012 14:24:44 · 0 Comments · 1902 Reads ·
14,667,292 unique visits